Shiinaha Goynta Mat for Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ goynta derin for Silhouette soosaarka soosaarka iyo Warshad | Allwin
Goynta Mat for Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ goynta derin for Silhouette cameo
Gogosha Gogosha loo yaqaan 'Silhouette Cameo' - - 12x12 gogosha gogosha ayaa ku habboon Silhouette cameo 3/2 / 1. Dharkaan goynta ah waxaa ku jira xariiqyo sax ah oo sax ah, oo si weyn u caawin doona habka goynta. Gogosha goynta ah ee loo yaqaan 'Silhouette Cameo' ayaa kaa caawin doonta inaad si fiican u dhammaystirto nashqaddaada hal-abuurka ah.
Size Baaxadda gogosha goynta】 - Cabbirrada goynta gogosha cabbirka leh ee isku wareegsan: 12x12 Inch (305X305mm), cabirka gogosha oo dhan: 12.99x14Inch (325X345mm) (L * W).
Material Waxyaabaha Tayada Sare leh ee PVC】 - MATS-yadaani waxay ka sameysan yihiin walxo PVC midab adag leh oo aan baabi'i doonin isticmaalka soo noqnoqda ka dib. Marka la barbardhigo noocyada kale, waa mid aad u adag oo adkeysi leh.
【Goynta Kaydinta Mats】 - U adeegso xoqista si aad u xoqdo qaybaha badan iyo spatula si aad si taxaddar leh uga saarto sawirrada la gooyey. Daboolka dusha sare ee filimka dusha ka saar gogosha goynta markaad kaydineyso si aad uga dhigto goynta dhejiska dhejiska mid ka madax bannaan qashinka iyo boodhka.
Lambarka Moodalka Shayga 8812
Cabirka Wax soo saarka 325x345 mm
Cabbirka (Cabbirka Daabacaadda) 12 x 12 INCH
Ku habboon Mashiinka Silhouette cameo 3/2/1
Derin goynta ku dheggan, oo dhumucdiisuna waxay 0.5mm. Maaddadu waa PVC hufan. Dhegdhegdu waxay leedahay laba nooc: dhejis dheeri ah iyo dhejis guud.Waxaan sidoo kale leenahay cabbirro kale: 12 "x 24", 12 "X 8", 12 "x 6", 4.5 "x 12", 4.5 "x 6.5" inji.
Hore: Goynta Mat for Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ goynta derin for Silhouette cameo
Xiga: Goynta Mat for Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ gogosha gogo 'for silhouette cameo
3 lakab A5 Goynta Mat, 883A5, Is bogsiinta Cu ...
3 lakab A1 Goynta Mat, 883A1, Is bogsiinta Cu ...
5 lakab A5 Goynta Mat, 661A5, Is bogsiinta Cu ...